UKhuphiswano lweNtengiso yendawo yokuFikela: Abafundi beDyunivesithi baPhumelela amaBhaso aKhethekileyo amatsha
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Education » UKhuphiswano lweNtengiso yendawo yokuFikela: Abafundi beDyunivesithi baPhumelela amaBhaso aKhethekileyo amatsha
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Education • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseMalaysia zokuPhula • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • Iindaba zaseTaiwan eziQhekezayo • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Abafundi baseYunivesithi bayaphumelela
Amaqela amahlanu eyunivesithi aphumelele imali kunye namabhaso kuKhuphiswano lweNtengiso yeNdawo yokuFikela yowama-2021 eyayisindlekwe yi-Bureau yaseTaiwan yoRhwebo lwaNgaphandle (BOFT) phantsi koMphathiswa weMicimbi yezoQoqosho (MOEA), kunye neBhunga loPhuhliso loRhwebo lwaNgaphandle laseTaiwan (TAITRA). Kukhuphiswano lwalo nyaka amaqela ali-17 asuka kumazwe ama-5 abonise indawo aya kuyo kwiintlanganiso, iimalike zohambo lwenkuthazo, iindibano kunye nemiboniso (MICE).
I-TAITRA kunye ne-Bureau of Foreign Trade inembali ende yokukhuthaza iinkokeli ezizayo ngokuxhaswa kokhuphiswano lwabafundi bamazwe ngamazwe.
Ngaphambili, amaqela axhaswe ngemali ayesiya eTaiwan ukuya kumela indawo asiya kuyo kukhuphiswano lonyaka.
Kulo nyaka, i-TAITRA yahambisa umboniso kwi-intanethi ngoncedo lwe-iStaging, iqonga le-intanethi lamagumbi omboniso, imiboniso yorhwebo, imiboniso, kunye nokhenketho.
Ibhaso lokuqala “loRhwebo kunye neSindululo-siCebo” laya kwiYunivesithi yeSizwe yaseTaichung yeSayensi nobuChwepheshe, eTaiwan, kunye neYunivesithi yaseMalaysia iSunway University iphumelele ibhaso lesibini kunye neYunivesithi yaseTaylor iphumelele ibhaso lesithathu. Uluhlu lweYunivesithi yaseTaylor, iYunivesithi yaseHoa Sen, iVietnam kunye neWenzao Ursuline University of Languages, eTaiwan, baphume kwindawo yokuqala, eyesibini neyesithathu, ngokulandelelanayo, kuwo omabini amacandelo “iVirtual Exhibition and Booth Design” kwakunye ne “English Tour Guide. .”
Onke amaqela afunde indlela yokusebenzisa iqonga le-iStaging kulo mboniso wenyani ngexesha elifutshane ngoncedo lwezifundo zevidiyo ze-intanethi kunye neworkshop yexesha langempela kwi-intanethi kunye nengcali ye-iStaging, uStefan Oostendorp. Iqela elivela kwiYunivesithi yase-Assumption, eThailand, lichukumisekile liqonga le-VR ye-iStaging, leza kwisivumelwano sokuvumela abafundi ukuba basebenzise iqonga labo le-VR ukuyila i-expo yabo kwihlabathi elibonakalayo njengenxalenye yomsebenzi wekhosi yeklasi yabo yokulawula imicimbi.
“Iqonga elibonakalayo le-iStaging lixhobisa abafundi baseyunivesithi ukuba baguqule inkcazo-ntetho yamandla yabafundi ibe ngamava okwenene okufunda. kwihlabathi virtual,” utshilo uGqr. Wongeze wathi: “Abafundi benze umsebenzi omhle kakhulu ngokudala amava abandakanyekayo kukhuphiswano kangangokuba ngoku ndiza kuba ndibandakanya iStaging kwizicwangciso zezifundo zeeklasi zam kwesi siqingatha sonyaka. Isimbo sokutsala kunye nokulahla inkqubo ye-iStaging esebenziseka lula ivumela abafundi ukuba babonise ngokukhawuleza izicwangciso zentengiso, iintetho kunye neeprojekthi ngokusebenzisa amagumbi omboniso, imiboniso ebonakalayo, imiboniso zorhwebo ebonakalayo kunye nokhenketho olubonakalayo.
I-iStaging isebenze ngokusondeleyo kunye neemveliso ezininzi zamazwe ngamazwe zentengiso yefashoni kunye neshishini lokuthengisa abathengi njenge-LVMH, i-Samsung kunye ne-Giant ukubandakanya amava abonakalayo kwiindwendwe. Ngoku, iStaging isebenza kunye neeYunivesithi ezidumileyo eAsia. Ingumboneleli okhokelayo we-out-of-the-box augmented and virtual reality solutions is headquarter in Taipei, Taiwan. Inkampani ikwaneeofisi zesatellite eSan Francisco, eShanghai naseParis. I-iStaging ijolise ekuncedeni abantu badlule indawo ngokuyila iimveliso zokuntywila ezibonakalayo ezixhobisa ihlabathi ukusebenzisana nabantu abakude, iindawo okanye izinto.